नोर्बु लामा : आखिरी थाके, नथाक ! - Jhilko
नोर्बु लामा : आखिरी थाके, नथाक !
रहेनन् नोर्बु लामा । २०७७ को शुरुवातीमै उनलाई गुमाइयो । शुभकामना दिने बेलामा समवेदना दिने अवस्था सिर्जना भयो ।
उनले आफ्नो नामको पछाडि नथाक उपनाम थप्ने गरेका थिए । तर, कालले थकायो । कोरोनाको भयावहमा स्वाभाविक मृत्यु मरेका उनको मलामी जान पाइएन । समवेदना, श्रद्धाञ्जली दिनका लागि छापा मिडिया पनि पाइएन । उनीसँग मेरो लामो उठबस भएको हो । मुलुक लकडाउन हुनुअघि मोवाइलमा सम्पर्कको प्रयास गरेको थिएँ । तर, लागेन । विरामी मान्छे, सायद निदाएका होलान् भन्ने लाग्यो । उनले भन्थेः एक दर्जन प्रकारका औषधि सेवन गर्नुपर्छ । पेटमा अनाजको मात्राभन्दा औषधिको मात्रा बढी पर्छ । कति थरि रोग लागेको छ भन्ने कुरा उनलाई नै थाहा थिएन । पायल्स, सुगर, प्रेसर, युरिक एसिड, घुँडामा संकुचन हुने, नसामा समस्या, एलर्जी आदि अनेक रोगको घर बनाएका थिए उनले आफ्नो शरीरलाई । रोगहरुले उनलाई नै लकडाउन गरिदियो । भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु । शोक सन्तप्त परिवारजनप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्दछु ।
नोर्बु लामा खासमा एउटा ब्यक्ति विशेष थिएनन् । उनी एउटा संस्था थिए । प्रतिभावान धरोहर थिए । उनको पहिचान उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चबाट बढी देखिएको छ । उनी सो संस्थाका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देहीका अध्यक्ष थिए । उपभोक्ताका अधिकारका आवाजहरु उठाउने प्रवक्ता थिए । उनी मञ्चमा बोल्थे । पत्रपत्रिकामा लेखहरु लेखेर उपभोक्तालाई सजग पार्थे । रेडियो, टेलिभिजनमा उपभोक्ता अधिकारका कुरा राख्थे । बेलाबेलामा प्रशासनको सहयोगमा खाद्य पसलहरुमा छड्के निरीक्षण गर्न पुग्थे । मासु पसलहरुमा हुने घपलाबाजी (मिसावट) बाट उपभोक्तालाई सजग तुल्याउँथे । कैयौँ खसीको मूल्य लिएर बाख्रीको मासु बेच्नेलाई कारवाहीको सिफारिस गर्थे । तोरीको तेलको लेवलमा मेक्सिकानाको तेल नेपालमा आयात गर्ने आयातकर्तामाथि रोक लगाउने र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिको क्षतिपूर्ति भराउने काममा उनको ठूलो योगदान रहेको थियो ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चमा मात्र उनी सीमित थिएनन् । उनी शैक्षिक अगुवा थिए । उनी रुपन्देहीको बुटवलमा विना मुनाफा निजी बोर्डिंग स्कूल सञ्चालन गर्ने अगुवा हुन् । शिक्षा दान हो, ब्यवसाय होइन भन्ने उनको मान्यता थियो । मुनाफा लिएर उनी कहिल्यै धनी बन्ने प्रयासमा लागेनन् । सँधै भाडाको कोठामा बसे । भाडामै घर लिएर स्कूल सञ्चालन गरे । मृत्यु पनि भाडाकै कोठामा वरण गरे ।
नोर्बु लामाको परिचय यत्तिमामात्र सीमित छैन । उनी तैल चित्रकार हुन् । उनले बनाएका चित्रहरु धेरै घरका भित्तामा सजिएका छन् । एकपटक अनुहार राम्रोसँग हेरे भने त्यो अनुहार उनले कागजमा उतारिदिन्थे । रंग भर्थे । दिन्थे । तर, निःशुल्क । उनले बनाएको एक थान गौतम बुद्धको चित्र मेरो घरको भित्तामा पनि लामो समय टाँगिएको थियो । पछि कसैलाई उपहार दिइयो । उनी कार्टुनिष्ट पनि हुन् । पत्रपत्रिकामा कार्टुन लेख्ने काम पनि गर्थे । उनका गोडाका गोलीगाँठा थान्का बनाउने क्रममा निकै बाक्लिएका थिए । भुइँमा चाकलमाडी बसेर थान्का कोर्ने उनको आदत थियो ।
पछिल्लो चरणमा उनले बुटवल टुडे राष्ट्रिय दैनिकमा स्तम्भकारको रुपमा खुबै रचनाहरु लेखे । खासगरी उपभोक्ताका हितका कुराहरु उनले उठाए । आफ्ना अनुभव, अनुभूतिहरु पस्के । उनले नेपाली जनतालाई उपभोक्ता हित अधिकारका सम्बन्धमा ठूलो योगदान दिएका छन् । कलम, कुचीबाट उनले आफ्नो प्रतिभा समाजलाई दिएका छन् । उनका ती तमाम रचनाहरु एउटै सँगालोमा समेटेर पुस्तिका बनाउने हो भने ठूलो पुस्तिका बन्छ । युग, युगान्तरका लागि त्यो अनमोल सूचना बन्न सक्छ । अन्त्यमा पुनः श्रद्धा सुमन !
निको भएकालाई फेरि कोरोनाभाइरसले नसमात्ने भनाइ पुष्टि भएको छैन्
जुम्लामा ‘अक्सिजन प्लान्ट’ सञ्चालन
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले आज सो प्लान्टको...
जसको एजेण्डा बिक्दैन उसको पार्टी टिक्दैन
राजनीतिक पार्टी भनेको एजेण्डा, नीति, सिद्धान्त, कार्यक्रम र संगठन हो । जुन पर्टीमा...
प्रदेश सरकारको विदाको अवज्ञा
प्रदेश २ सरकारले आईतबार विवाह पञ्चमीको अवसर पारेर घोषणा गरेको सार्वजनिक विदाको अवज्ञा...
त्रिशुलीमा ट्रक खस्दा चालकको मृत्यु
आइतबार बिहानीपख ना ५ ख ३७७७ नम्बरको सिमेन्ट बोकेको ट्रक त्रिशूलीमा खस्दा घाइते भएका...